Andian-tsary momba ny biby vita amin'ny penina mainty | Famoronana an-tserasera
Roa volana lasa izay dia nanana andian-tsary mahafinaritra maro amina karazana biby tsara azo aseho amin'ny fomba anamboarana ny antsasaky ny vatany amin'ny polygons. Ity fitambarana ity dia niteraka andiana kalitao tsara araka ny hitanao ato amin'ity fidirana ity izay hizaranay izany aminareo rehetra izay mamaky anay isan'andro.
Miverina amin'io fomba io ihany izahay izao ho an'ny fanoharana, na dia ankoatry ny filalaovana hafa amin'ny sary sasany nataon'ny mpanakanto Alfred Basha. Mpananatra iray izay mahomby manambatra natiora sy ny biby mba hanao fitambarana majestic, mety tsara kokoa amin'ny sombin-javatra sasany noho ny hafa.
Mahatsiaro ho tsara fanoloran-tena amin'ny mainty sy fotsy ary amin'ny asako manokana, ny fahitana ny hazavana maizina amin'ny karazan-tsary rehetra dia mazoto be. Basha dia manaraka an'io torolàlana io ihany koa mba hampahafantarana ny tenantsika amin'ireo andiana biby izay mifandray akaiky kokoa amin'ireo izay ho hitantsika any amin'ireo ala eropeana sasany.
Manomboka amin'ny orsa ka hatrany amin'ny sifotra, manomboka amin'ny amboadia mankany amina amboahaolo mandry tsara maka hatory kely manokana.
Una fiovan'ny zavaboary izay mampifangaro ny kanto indrindra amin'ny manodidina azy ireo mba hahafahan'izy ireo tena mpampiorina ny asa lehibe vita amin'ny penina mainty. Tsy ny kitapon'ireo biby izay hitantsika amin'ireo faritra eropeana misimisy ireo ihany no kasainy, fa mankany amin'ny tropikaly na any an'ala miaraka amin'ilay tigra hita ao amin'ny sary sasany nozarainy tao amin'ny Instagram-ny.
Asa tsara amin'ny ankapobeny vokatra tsara kokoa amin'ny biby sasany raha any amin'ny hafa dia mety ho zavatra ambonin'izany izy io. Azonao atao ny manaraka azy avy ny instagram ny fahafantarana ny fitiavany ny mainty / fotsy, ny biby ary ny fampifangaroana ny roa izay asehony an-tsitrapo isan'andro isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Andian-tsary an-tsary mampientam-po vita amin'ny penina mainty